Samsung waxay hagaajineysaa natiijooyinka maaliyadeed iyada oo ay ugu wacan tahay iibinta Galaxy S7 | Wararka IPhone
Samsung waxay hagaajineysaa natiijooyinka maaliyadeed iyada oo ay ugu wacan tahay iibinta Galaxy S7
In kasta oo Samsung Galaxy S7 uu suuqa ku jiray waqti ka yar iPhone 6s, dad aad u yar ayaa shaki gelin kara inuu yahay taleefan weyn. Xaqiiqdii, iibinta Terminal-kan ugu dambeeyay ee shirkadda Kuuriya waxay dib u soo ceshatay illaa iyo dhowr sano ka hor, taas oo Samsung uu ahaa boqorka iibka adduunka oo dhan xagga taleefannada calanka.
Kuwo badan ayaa ahaa adeegsadayaasha, oo ka kala yimid noocyo kale iyo kuwa isticmaala Apple, kuwaasoo bilaabay inay iibsadaan taleefankan kadib markii aan sifiican u tijaabiyay oo aan cadeeyay in dhamaan waxtarka laga sheegay ay run ahaayeen. Illaa iyo hadda ma aanan helin cid ku muujineysa raaxo la'aanta qalabkan cajiibka ah. Xaqiiqdii, waan tijaabinayay muddo toddobaad ah waana kan ugu fiican kan ugu fiican marka laga eego xagga badanna wuu ka sarreeyaa iPhone 6s.
Sida laga soo xigtay xogta Samsung ay gacanta ku heyso iyo maalmo ka hor intaan la soo bandhigin lambarrada rasmiga ah, shirkadda Kuuriya waxay kasban laheyd, rubuckan ugu dambeeya, wax ka badan 7.000 milyan oo doolar mahadsanidiin kala qaybsanaanta taleefannada casriga ah. Tirooyinka ku dhow diiwaanka taariikhiga ah ee 7.600 bilyan oo doolar oo ay heleen 2013. Xitaa sidaas oo ay tahay, waxay 17% ka badan tahay isla muddadii sanadkii la soo dhaafay.
Sida laga soo xigtay Reuters inta badan dakhligeeda waxay ka timaaddaa qaybta mobilada, halkaas oo eedda badankeed ay ku jirto Samsung Galaxy S7 iyo S7 Edge oo waxay iibiyeen 15 milyan oo cutub bishii Juun oo keliya. Ilaa dhamaadka bishan ma ogaan doonno tirada saxda ah ee aaladaha ay shirkaddu iibisay rubucii u dambeeyay, laakiin wax walba waxay muujinayaan inay ka adkaan doonto rikoodhkeeda ama ay aad ugu dhowdahay inay dhaafto. Waxay u muuqataa in sanadka ugu horeeya ee iibinta qalabka Apple ay bilaabeen inay hoos u dhacaan, aaladaha Samsung waxay dib u helayaan wadadii ay ka tageen dhowr sano ka hor.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Samsung waxay hagaajineysaa natiijooyinka maaliyadeed iyada oo ay ugu wacan tahay iibinta Galaxy S7
Telefoonku waa fiican yahay, waan isku dayay runtiina maanta ayaa ugu fiican
Jawaab Jose Alfredo Fernandez Sosa
Telefoonkani wuxuu ahaa dambiilaha aan uga tagay iphone-kayga, ama waxaa laga yaabaa inuu khalad ku lahaa Apple joojinta hal abuurnimada, runta ayaa ah in hada oo aan haysto S7 Edge aan ogahay in iphone-ka laga bartay dhinacyo badan
Waxaan si sax ah isku ahaa.
Waxaan u badalay iPhone 6 Plus + Apple Watch S7 Edge iyo Gear S2.
Waan ku faraxsanahay.
Ku jawaab Roviam
Sida loo rakibo beta-kii ugu horreeyay ee dadweynaha ee iOS 10, hadda waa la heli karaa